Soosaarida baradhada baradhada waxaa lagu xardhay Gobolka Novosibirsk - PotatoSystem
Soosaarka baradho chips ayaa lagu soo rogay gobolka Novosibirsk
Baradhadii hore ee Ruushka waxay hoos u dhacday 25%
Jun 30, 06:48
Sawirka daabacaadda "Soofiyeeti Soofiyeeti"
In kasta oo uu jiro cudurka dilaaga ah ee coronavirus, shirkadda beeraha ee Dary Ordynska, oo maanta ah mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha aan la isku halleyn ee Gobolka Novosibirsk ee soo-saarka khudaarta dhulka ka furan, ayaa ku dhammaystirtay abuuridda waqtigeeda. Tan waxaa si weyn u caawisay tikniyoolajiyadda cusub, oo ay beertu ku heshay taageero dowladeed.
Deyrtan waxay noqotay imtixaan dadka oo dhan, iyo beeraleydaba.
"Thanks to guga hore, qallalan iyo diirimaadka, waxaan bilownay ololaha beero laba toddobaad kahor jadwalka," ayuu yiri Shakir Suleymanov, madaxa OPH Dary Ordynska LLC. - Baradho la beeray iyo khudradda kale, oo lagu beeray sarreen iyo buudh. Wax walba way fiicnaayeen, laakiin hadda dalaggu waxay la'yihiin qoyaan. Way fiicnaan laheyd haddii roobab wanaagsan ay da'aan. Aagga dhul beereedka ah ee ku yaallay beeruhu wuxuu ahaa ku dhowaad heerkii sanadkii hore. Waxaan siinay 350 hektar baradho, 140 hektar oo karootada, kaabash, xididdo iyo khudaar kale. 1 hektar ayaa lagu beeray sarreen, iyo 170 oo hektar oo sanadkan ah waa buur-buur.
Sida madaxa shirkaduhu u sharaxayo, ololaha beeruhu wuxuu u dhacay si waafaqsan heerarka amaanka iyo cudurada faafa. Beertu waxay soo iibsatay xaddiga mashiin ah, galoofis iyo dawooyinka lidka ku takhasusay, oo ku kacaya lacag dhan. Laakiin, sida uu qabo xukunka qoto dheer ee Shakir Suleymanov, kharashyadaan si buuxda ayaa loo cadeeyay: qofna kama hadhin fasaxa bukaanka ee kooxda.
Xilliga cusub - oo leh qalab cusub
- Sannadkan waxaa calaamad noogu ahaa helitaanka qalab cusub oo beeraha ah. Waxaan si aad ah ugu guuleystaa soo iibsatay wax buufin iskiis u soo saare. Kaliya waxaan u baahanahay, maadaama aan beero khudaarta, oo ay si joogto ah ugu baahan yihiin in laga farsameeyo cayayaanka, cudurada, haramaha, iyo bacrimiinta. Mabda 'ahaan, ma heli kartid miro wanaagsan oo aan lahayn tan, gaar ahaan Siberiya iyo dhulka bannaan. Qaado aboor isku mid ah kaabash, kaas oo si cajiib ah u qaniintay sanadkii hore. Haddii aadan ka shaqeyn karin dalaga, iyo xitaa dhowr jeer xilli, waad iska ilaawi kartaa goosashada, ”ayuu yiri Shakir Suleymanov. - Markii hore, waxaan adeegsan jirnay buufis, oo tani waa mid aan dhib badnayn, oo waxqabadka ayaa hooseeyay. Hadda arrin gabi ahaanba ka duwan. Waxaan rajeyneynaa hadda inaan helno go'id wanaagsan.
Sida uu sheegayo agaasimaha beerta Dary Ordynsk, qof iskiis u shaqeyste ah ayaa heley beerta isagoo leh taageero dowladeed, heshiis ijaareed iyo shuruudaha ku habboon: iibsadehu ma bixiyo wax lacag ah sanadkii ugu horreeyay, ka dibna waxaa la siiyaa qorshe qaybsi sideed sano ah.
- Marka laga soo tago wax soo saareyaasha, waxaan soo iibsanay seddex cagaf oo dheeri ah iyo labo mashiin oo kuwa wax gubaya ah, laakiin tani mar hore waxay ku jirtay lacagta shirkadda. Si kale haddii loo dhigo, waxaan soo iibsannay xitaa qalab ka badan intii aan filaynay, laakiin la'aanteed maanta suurtagal ma aha, ayuu yidhi madaxa beerta.
Marwada Claire ee Siberiya
Iyo sidoo kale “Hadiyadaha Ordynsk” sanadkaan waxay beeraan 20 hektar oo baradhada Lady Claire ah ee xulashada Dutch. Tani waa xilli hore, cudur u adkaysata oo noocyo kala duwan oo wax soo saar leh, laakiin qiimaheeda ugu weyn xitaa ma ahan: xitaa digriiga ayaa ku habboon samaynta chips. Sidaad ogtahay, shirkadda "Pepsiko" ayaa dhisaya warshad loogu talagalay wax soo saarka cunnada fudud ee gobolkayaga, beertuna waxay mustaqbalka dooneysaa inay noqoto mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasheeda ugu waaweyn. Laakiin marka hore waxaad u baahan tahay inaad caddeyso in baradhada lagu beero beeraha Siberian ay ka soo baxaan shuruudaha adag ee shirkadda caalamiga ah. Si kastaba ha noqotee, Shakir Suleymanov wuxuu XNUMX% kalsooni ku qabaa khabiirkiisa - waa inay xalliyaan dhibaatooyinkaas oo keliya.
Waxaa qortay Katerina Koshkina
Source: Soofiyeeti Soofiyeeti
Tags: koraan baradho baradhadaGobolka Novosibirskkala duwan Lady Claire